Abesilisa vs. Abesifazane Ukuthengwa Kwe-Inthanethi | Martech Zone
Ubani othanda ukucabanga ngobulili? Ngenza… ngenza… ikakhulu ngoba yonke into ekhuluma ngempunga, abafana abakhuluphele abahlukanisile abaneminyaka engama-40 bayabonakala ngendlela engiphila ngayo. Ngingumzingeli ojwayelekile uma kukhulunywa ngokuthenga ... ngifuna, ngithola, ngiphume lapho. Ucwaningo lwami luqala ngemuva kokuthi ngivule ibhokisi ngithole ukuthi ngithenge into ebengingayidingi, engiyifunayo, noma engiyiqondayo. Ngingubaba ongayedwa ohlala nendodakazi eneminyaka engu-19 ubudala, uKatie, ongomunye wabathengi abangakholeki engake ngababona. Akazange ayizuze njengefa imikhuba yami, ngakho-ke ngizosho ukuthi izakhi zofuzo zobulili.
Lokhu infographic kusuka Inzwa Yokukhokha uyakupela… nakhu okutholakele okuyisi-6 kusuka ocwaningweni lwabo ngezindlela zokuthenga zabesilisa nabesifazane:
Baningi abesifazane abathenga ku-inthanethi kunabesilisa
Abesifazane bangabazingeli bezingxoxo
Abesifazane baya ezintweni ezenziwe ngezandla nangesikhathi sokuvuna
Ubuchwepheshe babafana nezicathulo zamantombazane? Cabanga futhi
Abesifazane bathanda izinhlelo zokusebenza
Ufuna ukukhuthaza umkhiqizo wakho kubantu besifazane bakho? Ngena ezinkundleni zokuxhumana
Vele, konke lokhu kusekela umbono wami wokuthi ngabesifazane ababusa umhlaba ngempela!
Tags: amadodaukuthengwa kwe-inthanethiPinterestRedditabesifazane
Kungani Abesifazane Beyiyona Real Power Behind Social Media